Naya Bikalpa | प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका कर्तुतहरु छताछुल्ला हुने डरले संसद विघटन गरेका हुन ! - Naya Bikalpa प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका कर्तुतहरु छताछुल्ला हुने डरले संसद विघटन गरेका हुन ! - Naya Bikalpa
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका कर्तुतहरु छताछुल्ला हुने डरले संसद विघटन गरेका हुन !
प्रकाशित मिती: २०७७ माघ २७, १३: ४४: २४
काठमाडाैं- विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएका जुझारु नेता हुन् मोहनप्रसाद बराल । जनताको कामप्रति सधैं दत्तचित्त भएर लागिपर्ने बराल नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद पनि हुन् । उनी सिन्धुलीको तत्कालीन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका थिए । सरकारबाट भएका भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो उत्रने बराल स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिन्छिन् । सरल जीवनशैली र बौद्धिक व्यक्तित्वले भरिपूर्ण बराल निष्ठावान नेता हुन् । समसायिक विषयमा केन्द्रित रहेर बरालसँग नयाँ विकल्पका लागि कालिका महतले गरेको कुराकानीः
प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेले देशैभरि विरोधका कार्यक्रमहरु राखेको छ । म पनि आफ्नो गृह जिल्ला सिन्धुलीमा विरोध कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँमा जाने काममा व्यस्त छु ।
नेपाली कांग्रेस विरोध कार्यक्रम मात्रै घोषणा गरेर बसेको रचनात्मक केही गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि के भन्नुहुन्छ ?
हामी सत्तामा हुँदा थुप्रै रचनात्मक काम गरेका थियौं । अहिले पनि गाउँगाउँमा गर्दै अगाडि बढेका छौं । हाम्रा विरोधका काम सबै साथीभाइहरुको समर्थन छ ।
विरोधका कार्यक्रममा कत्तिको जनसमर्थन पाउनुभएको छ ?
हाम्रो कार्यक्रममा जनताले अभुतपूर्व साथ दिएका छन् । ठूलो जनविश्वास नेपाली कांग्रेसप्रति भएको पाएको छु । जसरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ, त्यो गैरसंवैधानिक हो । यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर ठाउँ–ठाउँबाट जनताहरु उर्लिएका छन् ।
नेकपाका एकथरी नेपाल बन्दजस्ता काम गरिरहेका छन्, अर्काथरी सत्तामा बसेर बन्द गरिरहेका छन्, त्यो काम त प्रतिपक्षको होइन ? कांग्रेस त चुचाप छ नि ?
नेपाल गर्ने काम नेपाली कांग्रेसले गर्दैन । जीवनमा एकपटक गरेको थियो । त्यसमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै विरोध आयो । त्यसकारण सरकार विरुद्ध अन्य विरोधका कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । तर, नेपालै बन्द जस्ता ध्वंसात्मक कार्यक्रममा गर्न सकिँदैन ।
त्यसोभए नेपाली कांग्रेस सांकेति र रचनात्मक विरोधका कार्यक्रममार्फत सन्देश दिएर अगाडि बढ्ने हो ?
नेपाली कांग्रेसले विरोधका कार्यक्रम राख्दा एकदमै प्रजातान्त्रिक ढाँचाले गर्दछ । जहिले पनि रिरोधका स्वरुपलाई शान्तिपूर्ण राखेर कार्यक्रम गर्दछ । तर, कहिल्यैपनि नेपाली कांग्रेसले नेपाल बन्द गर्ने, सडका रेलिङ भाँच्ने, मान्छेसहितको गाडीमा आगो लगाउने, मुठभेड गरेर प्रहरी प्रशासनमाथि ढुंगामुढा गर्ने गर्दैन ।
नेकपाकै एक तप्काले विरोधका कार्यक्रमलाई हिंसात्मक ढंगले अगाडि बढाएको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरु जुन स्कुलिङबाट आउनुभएको हो, त्यही गर्नुहुन्छ । जीवनभरि उहाँहरुले त्यही काम गर्नुभयो । राम्रा र शान्तिपूर्ण काम गर्न उहाँहरुलाई आउनुपनि पर्याे नि । ध्वंसात्मक र हिंसात्मक बाहेकका काम गर्न च उहाँहरु जान्नुपनि हुनुहुन्न होला । चाहे सत्ता बस्ने हुन्, चाहे फुट्न खोजेर बाहिर किस्नुभएको छ । उहाँहरु दुवै पक्षले तोडफोड गर्ने, जनतामा आतंक बच्चाउने, सरकारमा रहनेले भ्रष्टाचार गर्ने, देशलाई लथालिङ्ग बनाउने काम गर्नुभएको छ ।
फुटेकाले त गरे तर प्रधानमन्त्रीले पनि प्रदर्शन गर्नुभयो नि यो सान्दर्भिक छ ?
प्रधानमन्त्रीले आभसभा नै गरेर त्यति कुरा भन्नुपर्ने थिएन । तर, त्यो माधव नेपाल, प्रचण्ड र झलनाथलाई देखाउन गर्नुभएको होला । ‘हेर तिमीहरुभन्दा म ठूलो छु’ भनेर । उहाँको यो कार्यक्रमको कुनै सान्दर्भिकता छैन ।
प्रधानमन्त्रीले पटकपटक बोल्दा असंवैधानिक कुरा बोलिरहनुभएको छ । भीडबाट नेकपा र सूर्य छाप कसको हो ? भन्न लगाउनुहुन्छ । देशमा यति धेरै समस्या छ । त्यसप्रति केही विचार गरिएको छैन । हावादारी कुरा बोलिरहनुभएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहनुभएको छ । यी क्रियाकलापलाई हेर्दा सबै असंवैधानिक छन् । उहाँ अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पुगिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको पदमा सबेर व्यक्तिगत कटू आलोचनाबाहेक केही गर्नुहुन्न ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले जनप्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन ?
उहाँले त्यो प्रदर्शन कसलाई देखाएको ? माधव नेपालहरुलाई देखाएको कि कांग्रेसलाई देखाएको ? अहिले उहाँभन्दा ठूलो शक्ति नेपालमा कुन छ ? राजा छैन । कि राजा ल्याउन गरेको भनेको भए त्यो पनि मान्नुहुन्थ्यो । अनि आफै कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर आफैले सडकमा मान्छे ल्याएर प्रदर्शन गरेर आफै अध्यक्ष भएको पार्टी कसको हो ? भन्नुहुन्छ । आफै चुनाव जितेर आएको चिन्ह देखाएर सूर्य छाप कसको हो भन्नुहुन्छ । त्यसकारण उहाँ जे गरिरहनुभएको छ, त्यो असंवैधानिक र व्यक्तिगत घमण्डबाहेक केही होइन ।
नेपाली कांग्रेसको विरोधका कार्यक्रमबाहेक भावी रणनीति के छन् ?
हामीहरुले अहिले भावी रण्नीति भन्दा पनि अदालतको मर्यादालाई हेरेर बसेको छ । अब अदालतले निर्वाचन गरे भन्यो भने त्यसमा पनि जाने भनेका छौं । तर, यो गैरसंवैधानिक कदम हो । अदालतको मर्यादालाई हेरेर हामीले पुनःस्थापनामा एकोहोरो जान नसकेको हो । अब अदालतबाट कस्तो निर्णय आउँछ । त्यसपछि कांग्रेसले आफ्नो रहणनीति बनाउँछ ।
नेपाली कांग्रेसलाई पुनःस्थापना भयो भने सत्तामा जान पाइन्छ भनेर चुपचाप बसेको भन्ने आरोप छ नि ?
पुनःस्थापना भयो भने यसै हो भन्न सकिँदैन, त्यो त भागमा आउन पनि सक्छ । हामीले भनेर नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु रोकिनु हुन्न होला । तर, संसद पुनस्थापना बाहेकको संवैधानिक विकल्प चाहीं म देख्दिँन । सर्वोच्च अदालतले जे भने पनि संविधानमा लेखेका कुरा त हामी पढेलेखेका सबैले पढ्न सक्छौं । त्यसैले संसद पुनस्थापनामा कुनै समस्या छैन अहिलेको संविधानमा ।
पुनःस्थापना गरेर चुनावी सरकार बनाउँदा संवैधानिक हुन्छ भन्ने लाइन हो कांग्रेसको ?
पुनःस्थापना गरेर सरकार बनाएपछि अर्को चुनावी सरकार नै बनाउनु पर्दैन । अब रेगुलर चुनाव आउन पनि १६,१७ महिना बाँकी छ । अब १४, १५ महिनापछि चुनावको मिति तोक्ने दिन आइसक्छ नि । पुनःस्थापना गरेर नयाँ सरकार बनाउने त्यसले चुनाव गर्दा थोरै भएपनि संवैधानिक हुन्छ । त्यो नै संविधान र व्यवस्था टिकाउने उपयुक्त बाटो हो । त्यसैले संसद पुनःस्थापना हुँदा धेरै राम्रो हुन्छ ।
त्यसोभए असंवैधानिक ढंगले गरिएको विघटनको विरोधको विकल्प छैन ?
असंवैधानिक कदमको विरोधको विकल्प छैन । तर, अहिले निर्वाचन आयोगले जुन प्रपञ्च गरेर पार्टी फुट्ने निर्णय दियो । त्यो पनि मलाई सान्दर्भिक छ भन्ने लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको पार्टी फुट्ने विधेयक पनि असंवैधानिक थियो ।
त्यसरी सबै संवैधानिक आयोगहरुले निर्णय दिने हो भने ती आयोगहरु पनि विस्तारै निकम्मा हुँदै जान्छन् । त्यसरी संवैधानिक आयोगहरु प्रधानमन्त्रीको छायाँमा पर्नुहुँदैन । फेरि चुनाव गर्ने नियत केपी ओलीको पनि देखिँदैन । किन भने निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटाउनको लागि एउटा संविधान सम्मत तरिका नअपनाएर काइते तरिका अगाडि ल्याएको छ त्यो ठीक होइन । चुनाव गराउनको लागि सर्वोच्च अदालतले पनि जति चाँडो फैसला दिनुपर्ने हो । त्यो अवस्था देखिएको छैन । त्यसकारण पनि चुनाव अलिकति सर्छ जस्तो लाग्छ । चुनावै गर्ने कुरामा त प्रधानमन्त्री ओली पनि कठिबद्ध हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीले तोकेको मितिमा चुनाव गर्न सक्नुभएन भने नेपाली कांग्रेसले के गर्छ ?
उहाँले तोकेको मिति चुनाव गर्न सक्नुभएन भने राष्ट्रिय सरकारको परिकल्पना गर्नुपर्छ । त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले एउटा मिति तोकेर संसद् भंग गर्ने अनि अदालतले चुनावको फैसला गरिदिने अनि चुनावको मिति तय नगर्ने हो भने सबै संवैधानिक संस्था लगायत ओली पनि निकम्मा होलान् नि । त्यसपछि केपी शर्मा ओली संविधानतः प्रधानमन्त्री भइरहन योग्य व्यक्ति रहेनन् नि ।
तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न सक्नुभएन भने ओलीको औचित्य समाप्त भयो ?
त्यसपछि त राष्ट्रिय सरकार चाहियो नि । त्यसै जथाभावी गर्न कहाँ पाइयो त ? आफै संसद भंग गरेर असंवैधानिक ढंगले चुनाव घोषणा गर्ने अनि चुनाव पनि गर्न नसक्ने भएपछि सरकारमा रहने आधार कहाँ हुन्छ । त्यसपछि पहिलाको जस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर देश अगाडि बढ्नुको विकल्प रहँदैन ।
सिन्धुलीमा विरोधका कार्यक्रमहरु निरन्तर राखिरहनुभएको छ ?
हो, हामीले जिल्लाका सबै ठाउँमा विरोधका कार्यक्रमहरु निरन्तर राखिरहेका छौं । हिजो पनि पेशागत संघ, संगठनका कार्यक्रहरु थिए । त्यसमा कर्मचारी, वकिल, शिक्षकलगायत पर्दछन् । त्यो कार्यक्रममा भव्य सहभागिता थियो ।
जिल्ला घुम्दा नेपाली कांग्रेसप्रति आकर्षण कस्तो देख्नुभयो ?
हामीले पार्टी प्रवेश गराउन भ्याइराखेका छैनौं । अहिले नेपाली कांग्रेसमा हरेक गाउँगाउँबाट हजारौं मान्छेहरु आइराखेका छन् ।
तर, नेपाली कांग्रेसले जनता आकर्षित हुने खासै नयाँ मुद्दा त ल्याउन सकेन नि ?
त्यस्तो मुद्दा भन्नाले अहिले त नयाँ मुद्दा आयो । हामीहरु पार्टी अधिवेशनको तयारीमा थियौं । अन्ततः यो देशमा संविधान ल्याउन कम्युनिस्ट सरकारबाट सम्भव भएको थिएन । त्यो नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेर ल्यायो । समृद्धिको लागि, संविधानलाई संस्थागत गर्नको लागि र स्थायी शान्तिको लागि यो संविधानको संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्छ । र समृद्धिको लागि पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट मात्रै सम्भव छ ।
त्यसोभए यो संविधानको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कांग्रेसले मात्रै सक्छ ?
त्यो त अहिले प्रष्टै देखियो नि । किन भने उहाँहरुले यसलाई मिचेर धेरै काम गरिसक्नुभएको छ । संवैधानिक निकायमा पनि काइते तरिकाले नियुक्ति दिने । मन्त्रिमण्ड गठन गर्न पनि त्यसैगरी गर्ने । यी सबै काम प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर गरिरख्नुभएको छ । अब यो संविधानलाई जीवन्त राख्न र राजनीतिलाई स्थिरता दिनको लागि नेपाली कांग्रेस देशलाई आवश्यकता परिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेस पनि विरोधका कार्यक्रममा एकजुट देखिएन नि ?
एकजुट नै छ नि । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले नै यो गैरसंवैधानिक छ भनेर निर्णय गरेको छ । हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेललगायत सबै केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरु जिल्लामा एकै स्वरमा विरोधका कार्यक्रम लिएर हिँडिरहनुभएको छ । ती कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा कसैले अलि चर्को स्वरमा चुनाव हुनुपर्छ भन्छन् । कसैले पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्छन् ।
यसले आ–आफ्नो दृष्टिकोण दिने क्रममा बेमेल जस्तो देखिएको हो । विरोधका कार्यक्रममा हिड्दा केही चुनाव भयो भने नेपाली कांग्रेसले सबै जित्छ भन्ने केही साथीहरुलाई लागेको छ । त्यो उहाँहरुको मूल्यांकनको कमजोरी हो । अहिलेको अवस्थामा पुनःस्थापनाबाहेक अर्को उपयुक्त बाटो म देख्दिँन ।
पुनःस्थापना भएन भने चुनाव नगरेर मुलुक अधिनायकवादतिर जान्छ भन्ने तपाईंको ठम्म्याई हो ?
हो, किन भने केपी शर्मा ओलीको चुनाव गर्ने छाँट देखिँदैन । अनि मुलुक एउटा व्यक्तिको लहडमा अधिनायकवादतिर उन्मुख हुन्छ । त्यसकारण अदालतले पनि पुनःस्थापनाबाहेकको बाटो रोज्दैन होला । अदालको मर्यादाको लागि संविधानको रक्षा गर्न जरुरी छ ।
नेकपाले जनमत लत्याएर मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्यो, कांग्रेसले जनसमर्थन छ भनेर मातिन थाल्यो भने कसरी थेग्न सक्छ ?
अब कांग्रेस मात्तिएर, बरालिएर जनविश्वासमाथि खेलवाड गर्नेवाला छैन । किन भने हामी पार्टी अधिवेशनको संघारमा पनि छौं । अब नेतृत्व भावी पुस्ताले गर्छ भन्ने विश्वास पनि हामीलाई छ । त्यसकारण युवाहरुलाई पार्टीभित्र राख्नको लागि पनि महाधिवेशनले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । अब हिजोको जस्तो अवस्था नेपाली कांग्रेसमा नहोला । युवाहरुको जमात पनि पार्टीभित्र राम्रो भइसकेको छ ।
यो सरकार चौतर्फी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दा पनि कांग्रेसबाट चखिलो ढंगले विरोधको स्वर आएन नि ?
हामीले धैर्यताकासाथ केही समय हेरेका थियौं । सरकारबाट केही करेक्सन भइहाल्छ कि भनेर । यो संसद विघटन हुनु अगाडि भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय रुपमा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका थियौं । भ्रष्टाचारको विरोध राष्ट्रिय रुपमा गर्ने भनेर पार्टी लागिसकेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका कर्तुतहरु छताछुल्ला हुने डरले पनि संसद विघटन गरेको हुनुपर्छ ।
त्योसोभए प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार लुकाउन संसद भंग गर्नुभएको हो ?
त्यो त पक्कै हो नि । किन भने ३३ किलो सुन काण्डको फाइल पनि प्रधानमन्त्रीकोमा छ । गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणको फाइल पनि उहाँसँगै छ । ओम्नी ग्रुप, यति ग्रुप, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडवडी काण्डलगायत सबै घोटाला काण्डका फाइल उहाँले नै राख्नुभएको छ । ती सबैबाट असुलउपर गरेर थन्क्याउनु भएको त होला नि । त्यहीं कर्तुत छोप्नको लागि अहिले नयाँ किसिमले जान्छु भन्नुभयो । यी कर्तुत त उहाँ बाँच्दा मात्रै चल्ने होइन नि । कानुनमा लेखिएका कुरा त उहाँ बितिसक्दा पनि इतिहासमा लेखिन्छ । त्यसैले उहाँ वर्तमानमा मात्रै होइन, भविष्यमा पनि लोकप्रिय हुनुहुन्न । केपी ओली सधैं प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न होला, एक दिन उहाँका कर्तुतहरु छताछुल्ला हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला क्रियाकलापले लोकतन्त्रमाथि धक्का पु¥याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, यसलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
लोकतन्त्रमाथि धक्का पु¥याउन उहाँको ल्याकतले भ्याउँदैन । उहाँहरु एकदलीय तानाशाही भएपनि अहिले कांग्रेसका कारण लोकतान्त्रिकरण हुनुभएको छ । विश्वका अल्प कम्युनिस्टहरु पनि विस्तारै डेमोक्रेसीप्रति विश्वास गर्दै आएका छन् । त्यसकारण उहाँले लोकतन्त्र मास्न चाहेर पनि सक्नुहुन्न । उहाँले यतिधेरै भ्रष्टाचार गरेर पाप गर्नुभएको छ । त्यो पाप पखाल्न पशुपतिमा बत्ती बाल्न त जानै पर्याे नि ।
केपी ओलीका कारण नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन त ओझेलमा प¥यो नि ?
अधिवेशन गर्न समय छ । जेठमा चुनाव भएन भने असारको पहिलो हप्ताबाट गाउँ अधिवेशन सिध्याउँछौं । साउनमा प्रदेश र भदौमा केन्द्रको सिधिन्छ ।
जिल्लामा अधिवेशनको तयारी गरिरहनुभएको छ ?
हो, जिल्लादेखि गाउँतहसम्म पार्टी अधिवेशनको पनि तयारी भइरहेको छ । आम चुनावको पनि तयारी भइरहेको छ ।
हिजो फूर्किएर कम्युनिस्टलाई भोट हाल्नेहरु के भन्छन् ?
कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने मात्रै होइन । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता पनि अब हामी कम्युनिस्टलाई भोट हाल्दैनौं भन्न थालेका छन् ।
जनताहरु अहिले चुनाव चाहन्छन् ?
जनताहरु चाँडोचाँडो हुने चुनावबाट त वाक्क छन् । तर चुनाव हुन्छ भनेपछि त्यसकै पक्षमा छन् । पाँच वर्ष चल्छ कि भनेर कम्युनिस्टलाई दिएको यिनीहरु काम नलाग्ने रहेछन् । बरु कांग्रेसलाई दिनुपर्ने रहेछ भन्छन् ।
तपाईं त सुपरिचत नेता सिन्धुलीको लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
अब सिन्धुली जिल्लाको लागि सडकको संरचनालाई अलि विस्तार गर्नुपर्ने छ । विद्युत् र खानेपानीको तुरुन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि शिक्षालाई गाउँगाउँमा सन्तुलित वितरण गर्न सरकारले एउटा वाइफाइ जोड्ने भनेको थियो । त्यो वाइफाइ नेकपाकै सरकार आएपछि जोडे । त्यो चोरीको रहेछ कुनै स्कुलमा चलेको छैन । इ–लाइबे्ररीको व्यवस्था गर्न सकियो भने शिक्षामा गुणस्तर हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरु राजनीति थलो बनेपछि विद्यार्थीहरु बाहिएका छन् के भन्नुहुन्छ ?
राजनीति थलो भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा उचित व्यवस्थापनको अभावले त्यस्तो भएको हो । यहाँका शिक्षकहरु अयोग्य छन् भन्नेमा म त्यति विश्वास गदिँन । यहाँ त लोकसेवा पास गरेका शिक्षकहरु छन् ।
लोकसेवा फेल हुने पनि निजीमा गएर ट्यालेन्ट भएर बसेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई उहाँहरुमा भएको सीप र ज्ञानलाई परिमार्जित गरेर लान उचित तालिम अध्ययनको कमी छ । त्यसको साधन, स्रोतको व्यवस्था छैन । निजीमा व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुन्छ अनि ट्यालेन्ट शिक्षक छन् जस्तो लाग्छ । सामुदायिकमा उचित व्यवस्थापनको कमीले योग्य शिक्षकले पनि अयोग्य जस्तो देखिएको हो । तर, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अयोग्य छैनन् ।
२०७७ माघ २७, १३: ४४: २४